U-Edwin V. Sumner - iMfazwe yombutho - iManyano - Jikelele Jikelele
Edwin V. Sumner - Ubomi bokuqala kunye nomsebenzi:
Wazalwa ngoJanuwari 30, 1797 eBoston, MA, uEdwin Vose Sumner wayengunyana kaElisha noNancy Sumner. Ukuya ezikolweni zaseNtshona kunye neBillercia njengomntwana, wafumana imfundo yakhe kamva eMilford Academy. Ukuqhubela phambili umsebenzi we-mercantile, uSumner waya eKroy, NY njengendoda eselula. Ukukhawuleza ngokukhawuleza kweshishini, wafuna ngempumelelo ikhomishini e-US Army ngo-1819.
Ukujoyina i-2 ye-infantry yase-US ngoMatshi 3 kunye nenqanaba le-lieutenant yesibini, ukuthunyelwa kuka-Sumner kwaqhutyelwa ngumhlobo wakhe uSamuel Appleton Storrow owayesebenza kuMagosa Jikelele uJacob Brown. Emva kweminyaka emithathu emva kokungena kwinkonzo, uSomner watshata noHana Foster. Wakhuthazwa ku-lieutenant wokuqala ngoJanuwari 25, 1825, wahlala kwindawo yokulala.
UEdwin V. Sumner - iMfazwe yaseMexico naseMerika:
Ngowe-1832, uSumner wathatha inxaxheba kwiMfazwe ye-Black Hawk e-Illinois. Ngomnyaka kamva, wathola ukunyuswa kwinduna waza wathunyelwa kwi-1 US Dragoons. Ukubonisa igosa elinobuchule lokulwa namahhashi, uSumner waya eKarlisle Barracks ngo-1838 ukuba abe ngumfundisi. Ufundisa esikolweni samahhashi, wahlala ePennsylvania kwaze kwaba yilapho ethatha isabelo e-Fort Atkinson, IA ngo-1842. Emva kokukhonza njengomlawuli weposi emva kwe-1845, wakhuthazwa ngo-Juni 30, 1846 emva kokuqala kweMfazwe yaseMexico naseMerika. .
Ukwabiwa kwi- Major General Winfield yaseScott umnyaka olandelayo, uSumner uthathe inxaxheba kwiqela lokulwa noMexico City. Ngomhla ka-Ephreli 17, wathola ukuphakanyiswa kwe-brevet ku-lieutenant colonel ngokusebenza kwakhe kwi- Battle of Cerro Gordo . Yakhiwe entloko yintlupheko ngexesha lokulwa, uSumner wathola isiteketiso "iNtloko yeBull." NgalooAgasti, wayeyongamela imikhosi yokugcina yaseMerika ngexesha leMfazwe yaseContreras noChurubusco ngaphambi kokuba athathwe kwi-colonel ngenxa yezenzo zakhe ngexesha leMfazwe yaseMolino del Rey ngoSeptemba 8.
U-Edwin V. Sumner -Antebellum:
Wakhuthazwa kuba ngu-lieutenant colonel we-1 US Dragoons ngoJulayi 23, 1848, uSumner wahlala kunye ne-regiment de kubekwe igosa lombutho wezempi eNew Mexico Territory ngo-1851. Ngo-1855, wathola ukunyuswa kwi-colonel kunye nomyalelo we-US eyayisandul I-1st horse horse e-Fort Leavenworth, KS. Ukusebenza kwi-Kansas Territory, ulawulo lukaSumner lwasebenza ukugcina uxolo ngexesha leNkqubela yaseBleeding Kansas kwakunye nephulo lokulwa neCheyenne. Ngo-1858, wacinga umyalelo weSebe leNtshona kunye nekomkhulu lakhe eSt. Louis, MO. Ekuqaleni kwenkathazo yecala emva kokunyulwa kwe-1860, uSomner wacebisa umongameli-wakhetha u- Abraham Lincoln ukuba ahlale exhobile ngamaxesha onke. Ngo-Matshi, uScott wamyala ukuba angene eLincoln esuka eSpensfield, IL ukuya eWashington, DC.
U-Edwin V. Sumner - Imfazwe Yombutho iyaqala:
Ngokuxoshwa kukaGrigadier Jikelele uDavid E. E. Twiggs ukunyanzela ekuqaleni kwe-1861, igama likaSumner lagqitywa yiLincoln ngokuphakama komgadi-jikelele we-brigadier. Kuyavunyelwa, waphakanyiswa ngo-Matshi 16 waza wayalelwa ukuba akhululwe uBrigadier General Albert S. Johnston njengomlawuli weSebe lePacific. Ukusuka eCalifornia, uSumner wahlala eNtshona Coast kwaze kwaba nguNovemba.
Ngenxa yoko, waphoswa kwimikhankaso yokuqala yeMfazwe yombutho . Ebuyela empuma, uSomner wakhethwa ukukhokela i-II Corps eyayisanda kubunjwa ngo-Matshi 13, 1862. Ehlanganiswe noMbutho Jikelele uGeorge B. McClellan we-Potomac, ii-Corps zaqala ukuhamba ngezantsi ngo-Ephreli ukuba zithathe inxaxheba kwi-Peninsula Campaign. Ukuqhubela phambili kwiPeninsula, uSumner olawula i-Union forces kwi-Battle of Scandal ngo-Meyi 5. Nangona egxekwa ngenxa yokusebenza kwakhe nguMcClellan, waphakanyiswa ukuba abe yintloko jikelele.
Edwin V. Sumner - KwiPeninsula:
Njengoko i-Army yasePomomac kufuphi neRichmond, yahlaselwa kwi- Battle of Seven Pines yi- General Joseph E. Johnston kwi-Confederate yamandla ngoMeyi 31. Ngokubanzi, uJohnston wazama ukuhlukanisa kunye nokutshabalalisa i-Union III ne-IV Corps eyayisebenza kuMlambo waseChikkahominy.
Nangona ukuhlaselwa kwe-Confederate akuzange kwenzeke njengokuba bekucwangciswe okokuqala, amadoda kaJohnston abeka amabutho eManyano phantsi koxinzelelo olunzima aze ekugqibeleni aphephe iphiko le-IV Corps. Ukuphendula kwentlekele, uSumner, ngokwakhe ngokwakhe, walela ulwahlulo lukaBrigadier General uJohn Sedgwick ngaphaya komlambo ovuthayo. Ukufika, babonisa ukugxininisa ekuqiniseni isikhundla seManyano kunye nokujika emva kokuhlaselwa kwe-Confederate. Ngenxa yemigudu yakhe kwi-Seven Pines, uSumner wabukelwa ngumphathi jikelele kumkhosi oqhelekileyo. Nangona kungenakulinganiswa, imfazwe yabona uJohnston walimala waza watshatyalaliswa nguGeneral Robert E. Lee kunye noMcClellan wayemisa phambili kwiRichmond.
Emva kokufumana isicwangciso esicwangcisekileyo kunye nokuzama ukunciphisa uxinzelelo kwi-Richmond, uLee wahlasela amabutho eManyano ngoJuni 26 eBeverver Dam Creek (Mechanicsville). Ukususela kwiiNtsuku zeeNtsuku ezisixhenxe, kwabonakala kukunqoba kweManyano. Ukuhlaselwa kwe-Confederate kwaqhubeka ngosuku olulandelayo noLee benqoba kwiGains 'Mill. Ukuqala kokubuyela kwiMlambo kaYames, uMcClellan wayeyinkimbinkimbi yimeko ngokuhlala esephumile emkhosini kwaye engayiqeshanga okwesibini ukulawula imisebenzi ngokungabikho. Le nto yayingenxa yombono wakhe ophantsi uSomner oya kuthi, njengomphathi wamagosa aphezulu, wayefumene iposi. Ukuhlaselwa kwiSitishi seSavage ngoJuni 29, uSomner walwa nelokulwa, kodwa waphumelela ekugubungeni umkhosi wokubuyela emkhosini. Ngolunye usuku olulandelayo, umzimba wakhe wadlala indima kwi- Battle of Glendale . Kwindlela yokulwa, uSumner wathola isilonda esincinane kwingalo.
U-Edwin V. Sumner - IiPhulo zokugqibela:
Ngokwehluleka kwePeninsula Campaign, i-II Corps yayalawulwa ngasentla kwiAlexandria, VA ukuba ixhase i- Major General John Pope yase-Virginia. Nangona iindawo ezikufuphi, izigqeba ngokusemthethweni zahlala ziyingxenye yeMpi yasePotomac kunye noMcClellan ingavumi ukuvumela ukuba iqhube phambili ekuncedeni uPapa ngexesha leSibini iMfazwe yaseManassas ngasekupheleni kweAgasti. Ekuvukeni kweManyano, uMcClellan wathatha umyalelo enyakatho yaseVirginia waza wabuya wangena ekungeneni kukaLee eMadland. Ukuqhubela ngasentshonalanga, umyalelo kaSumner wawugcinwe ngexesha lokulwa kweNtaba yaseMzantsi ngoSeptemba 14. Kwiintsuku ezintathu kamva, wahokela ii-Corps phezu kwintsimi ngexesha le- Battle of Antietam . Ngo-7: 20 AM, uSumner wathola iilayithwa zokuthatha amacandelo amabini ekuncedeni mna kunye ne-XII Corps eye yahlala ngasenyakatho ye-Sharpsburg. Ukukhetha abo baseSedgwick kunye noBrigadier General William French, wakhetha ukukhwela kunye naye ngaphambili. Ukuqhubela ngasentshonalanga ukuya empini, la macala ahlukana.
Nangona kunjalo, uSumner waphakamisa phambili ngenjongo yokuguqula i-Confederate ngasecaleni. Ukusebenza ngolwazi ngesandla, wahlasela eNtshona Woods kodwa kungekudala wafika emlilweni evela kumacala amathathu. Ngokukhawuleza, isahlulo sikaSedgwick saqhutyelwa kuyo. Kamva ngosuku, intsalela yeSigner yabamba uluhlu lweentlupheko ezingenayo igazi kunye nezikhundla ze-Confederate ezisezantsi kwindlela eyawunqumlayo. Kwiiveki emva kwe-Antietam, umyalelo womkhosi udluliselwe kuMaja Jikelele u-Ambrose Burnside owaqalisa ukulungiswa kwakhona kwesakhiwo sawo.
Oku kubonwe uSumner ophakanyisiwe ukukhokela iCandelo eliLungileyo eliLungileyo elibandakanya ii-II Corps, i-IX Corps, kunye nokwahlukana kwabamahashe abaholwa ngu- Brigadier General Alfred Pleasonton . Kulo lungiselelo, uMongameli Jikelele Jikelele weDarius N. uthatha umyalelo we-II Corps.
NgoDisemba 13, uSumner wabakhokela ngokutsha kwakhe ngexesha leMfazwe yaseFredericksburg . Ukusebenza ngokubetha ngokukhawuleza imigca yeLieutenant General James Longstreet e-Marye's Heights, amadoda akhe aqhubela phambili kungekudala ngaphambi kwelanga. Ukuhlaselwa emini, iMinyanzelo yaxhamla ngokulahlekelwa okukhulu. Ukuqhubeka nokungaphumeleli kwinqanaba le-Burnside kwiiveki ezalandelayo kwambona esikhundleni sakhe nguMongameli uJoseph Joseph Hooker ngoJanuwari 26, 1863. Umdala omdala kwi-Army yasePomomac, uSumner wacela ukuba akhululwe kungekudala emva kokutyunjwa kukaHooker ngenxa yokudinwa kunye nokukhungatheka ukuxhaphaza phakathi kwamagosa eManyano. Utyunjwe umyalelo kwiSebe laseMissouri kungekudala emva koko, uSumner wabulawa ngesifo senhliziyo ngo-Matshi 21 ngoxa e-Syracuse, NY ukuvakashela intombi yakhe. Wangcwatyelwa eMangcwabeni yase-Oakwood emva kwexesha elifutshane.
I-Territorial Kansas: Edwin V. Sumner
Imfazwe: U-Edwin V. Sumner
Imfazwe Yemfazwe Yomkhosi: Edwin Sumner
Imfazwe YaseMelika: I-General General Ambrose Burnside
Inxalenye engalunganga (igrama)
Iyintoni intsingiselo kunye nokubaluleka komhla we-Arafat?
Ukusuka ku-AZ: I-Star Wars iglosari
Juz '21 yeQuran
Yintoni eyenziwe ngamaCD?